Iindlela ezininzi zokusetyenziswa kweCarbon Fiber
Amashishini Aye athatha iFiber Fiber
Kwiimpawu eziqinisiweyo zefiber, i-fiberglass "yihashe yomsebenzi" yoshishino. Isetyenziswe kwizicelo ezininzi kwaye ikhuphisana kakhulu kunye nezinto eziqhelekileyo ezifana neenkuni, isinyithi kunye nekhonkrithi. Iimveliso ze- fiberglass zomeleleyo, zilula, zingenzi, kwaye iindleko ezibonakalayo zodidi lwe-fiberglass ziphantsi kakhulu.
Kwizicelo apho kukho i-premium yamandla okwandisa, ubunzima obuphantsi okanye i-cosmetics, ke ezinye iimbumba zokuqinisa ezibizayo zisetyenziswe kwi-FRP.
I-Aramid fiber , efana neDuPont kaKevlar, isetyenziswe kwisicelo esidinga amandla aphezulu aphezulu apho i-aramid inikeza. Umzekelo wale nto yinqwelwe yomzimba kunye nezithuthi, apho izakhiwo ze-aramid ezomelezwayo zidibanisa zikwazi ukuyeka izibhamu eziphezulu eziphefumlelweyo, okwenziwe kwiindawo eziphezulu zokuqina kwee-fibers.
Iimboniselo zeCarbon zisetyenziswa apho ubunzima obuphantsi, ukuqina okuphezulu, ukuqhuba okuphezulu, okanye apho kubonakala khona i-carbon fiber.
I-Aerospace kunye neendawo zazingamanye amashishini okuqala ukufumana i-carbon fiber. I-modulus ephezulu ye-carbon fiber yenza ukuba kulungele ukulungelelanisa i-alloys njenge-aluminium kunye ne-titanium. Isisindo sokulondoloza i-carbon fiber sibonelela isizathu esibalulekileyo sokuba i-carbon fiber iye yamkelwa yi-industry ye-aerospace.
Zonke iipounds zokulondoloza isisindo zingenza umehluko omkhulu ekusebenziseni umbane, yingakho iBeeing entsha ye-787 Dreamliner ibe yinqwelo ehamba phambili ekuthengiseni.
Uninzi lwalo lwakhiwo lweenqwelo zeenqwelo ze-carbon fiber zihlanganisiwe.
Imidlalo yokuzonwabisa yinye inxalenye yeemarike ezingaphezulu kokuzikhethela ukuhlawula ngaphezulu umsebenzi ophezulu. Izixhobo zokudlala i-Tennis, iiklabhu zegalufu, iilwimi zebhola, iinkuni zeHockey, kunye neentonga zeentonga kunye neminquba yonke imveliso eyenziwa ngokuqulunqwa kwee-carbon fiber.
Izixhobo ezinzima zokuzibamba ngaphandle kokunciphisa amandla yinto ekhethekileyo kwimidlalo. Ngokomzekelo, kunye nokukhwabanisa kwetenethi, umntu unokufumana isantya esheshayo ngokukhawuleza, kwaye ekugqibeleni, ukubetha ibhola ngokukhawuleza nangokukhawuleza. Abadlali bebhola bayaqhubeka bexhamla ukuba bafumane ithuba kwiziko. Yingakho iibhayisiki ezinzulu zihamba ngeebhasi ze-carbon fiber kwaye zisebenzise izicathulo zebhayisikili ezisebenzisa i-carbon fiber.
I-Wind Turbine Blades
Nangona uninzi lwentsimbi yomoya lusebenzisa i-fiberglass, kwiindawo ezinkulu, ngokuphindaphindiweyo ngaphezu kwe-150 ft ubude, ezi zibandakanya ingqungquthela, okuyiyo intambo enzima eyenza ubude bomlenze. Ezi ziqendu zihlala zi-100% zekhabhoni, kwaye zininzi njengama-intshi embalwa kwi-root blade.
I-carbon fibrons isetyenziselwa ukubonelela ukuqina okuyimfuneko, ngaphandle kokungenisa ubuninzi bexabiso. Oku kubalulekile kuba i-lighter i-wind turbine blade yile ndlela, kusebenza ngakumbi ekudaleni umbane.
Iimoto eziveliswa ngamathambo azikabi ukufumana i-carbon fiber; oku kungenxa yokunyuka kweendleko eziphathekayo kunye neenguqu ezifunekayo ekusebenziseni izixhobo, okwamanje, zigqithisa izibonelelo. Nangona kunjalo, i-Formula 1, i-NASCAR, kunye neemoto eziphezulu zisebenzisa i-carbon fiber. Kwiimeko ezininzi, akubangenxa yeenzuzo zepropati okanye ubunzima, kodwa ngenxa yokubukeka.
Kukho amaninzi emva kweemoto zecandelo lezimoto ezenziwe nge-carbon fiber, kwaye esikhundleni sokuba zipeyinti, zicace. I-carbon fiber ekhethiweyo i-wear has become a symbol of hi-tech kunye ne-hi-performance. Enyanisweni, kuqhelekile ukubona emva kweemakethe zecandelo lokuthengisa imoto elona linye liseko yekhabhoni ye-carbon, kodwa linamaqela amaninzi e-fiberglass apha ngasezantsi ukwenzela ukunciphisa iindleko. Oku kuya kuba ngumzekelo apho ukubukeka kwe-carbon fiber kukwenene kwisigqibo.
Nangona ezi zizinto ezisetyenziswa ngokuqhelekileyo kwe-carbon fiber, ezininzi izicelo ezintsha zibonwa phantse nsuku zonke. Ukukhula kwe-carbon fiber kukhawuleza, kwaye kwiminyaka emi-5 kuphela, olu luhlu luya kuba luninzi.
Indlela yokwenza i-Buttermilk - I-Recipe ye-Buttermilk elula
Ngaba i-Adderall iyisishukumisayo okanye iCress?
I-Degrees ye-Intanethi ikhula ngokuDumela nokuPhakamisa
Iinqununu zeeMnxeba zeeNwele
Abantu basekhaya bafumana njani iiDiploma?
Uphi Uhluko phakathi kweKhemistry kunye noNjineli yobunjineli?
Ukubhiyozela iSamhain nabantwana
Izibambiso zesiTenzi zesiTaliyane: I-Aiutare